Vavaka hanoherana ny fandotoana nofy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaka hanoherana ny fandotoana nofy
Androany isika dia hikaroka hery izay mandoto ny nofin'ny lehilahy iray ary mivavaka manohitra ny fandotoana nofy toy izany. Voalohany, tokony ho fantatsika fa tsy nofinofy ny nofinofy izay fahitana amin'ny torimaso, fa ireo tanjona ireo sy ny hetaheta no miandry fisehoana.
Tsy misy olona tonga tsy nahy tsy nahy, nokendren'Andriamanitra izany ary tsy maintsy nahita karazana fanambarana iray ny maha izy azy. Manana drafitra lehibe ho an'ny tsirairay avy amintsika isika, na izany aza, ny devoly dia manana ny tetiny ihany koa.
Na dia hahita olona miasa tsara amin'ny dingana iray eo amin'ny fiainana ianao nefa miova tampoka tampoka. Fantatro tsara fa isika rehetra dia tsy maintsy efa niaina zavatra toy izany. Mpianatra iray izay nanao tsara tamina akademika ary ny olona dia efa nahita azy ho nahomby indrindra teo amin'ny namany fa ny tampoka dia namolavola tampoka tampoka ary nanomboka namorontana ny fiaraha-monina.
Moa ve tsy nahita ankizy manana fanantenana be ianao, ary isaky ny manontany izy ireo ny zavatra tiany hitranga amin'ny hoavy akaiky, ny valintenin'izy ireo dia manambara fa manana drafitra lehibe ho an'ny hoavy izy ireo. Na izany aza, ao anatin'ny indray mipi-maso, dia hiharan'ny loza ara-tsosialy izany ankizy na olona izany. Ireo no demonia mandoto ny nofin'ny olombelona.
Ny mendrika ho fantatra dia ny devoly tsy manambaka olona tsy antom-pianarana, tsy manana orinasa amin'ny zanak'olombelona tsy manam-bola ny devoly. Ny devoly dia tsy manana olana amin'ny olona manana fanantenana lehibe ihany, ny olona izay manana ny nofiny sy ny hetahetany dia lehibe mba hisy fiantraikany amin'ny tany manontolo.
Iray amin'ireo tranga mitovy amin'izany ao amin'ny Baiboly i Josefa zanakalahin'i Jakôba. Josefa dia nanonofy, Andriamanitra naneho azy ny halehiben'ny nofiny. Nozarainy tamin'ny fianakaviany ny nofy ary niady taminy ny iray tam-po aminy. Fantatry ny devoly tsara fa Andriamanitra dia nanomana an'i Josefa ho tonga mpanafaka ny olona any Egypta sy Isreal amin'ny ho avy akaiky indrindra, fantatry ny devoly fa ny nofin'i Josefa dia midika hoe ho lehibe sy tena hahomby izy, koa dia nanao izay handoto ny nofin'i Josefa ny devoly. .
Rehefa te handoto ny nofinofin'olona ny devoly, dia hampiasa olona mahazatra ny olona hanandrana misintona anao. Ho an'i Joseph, ny devoly dia nampiasa ireo mpiray tam-po aminy mba hamitana ny tanjony amin'ny alàlan'ny fananana azy ireo hivarotra an'i Josefa ho andevo.
Zavatra toy izany koa no nanjo an'i Kristy Jesosy, fantatry ny devoly fa taorian'ny fahalavoan'ny olombelona tao amin'ny bokin'ny Genesis dia tsy nankasitraka loatra ny toetran'ny olombelona vaovao Andriamanitra. Fantany fa nofinofin'Andriamanitra ny hamerenana amin'ny laoniny ny olona any amin'ny sehatry ny voninahitra izay nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ka rehefa tonga i Kristy Jesosy dia fantatry ny devoly fa fitaovana hanatanterahan'Andriamanitra ny nofinofiny ka nahatonga azy hamono an'i Jesosy fony izy mbola kely.
Toy izany koa ny fiainantsika amin'ny maha-Kristiana antsika, samy manana nofinofy sy hetahetam-piainana ho an'ny fiainantsika sy ny hoavintsika isika, na izany aza, toa hadinontsika fa nofinofy na nofy ilay nofy. Betsaka ny olona namoy ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fiainany fotsiny satria nandoto ny nofinofy ny devoly. Tsy mahagaga raha nilaza ny manam-pahaizana iray fa ny tany manankarena indrindra eto an-tany dia ny fasana satria olona an-jatony tapitrisa no maty nefa tsy nahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fiainany.
Isaky ny mahatsapa ianao fa mahatsapa lainga amin'ny fitadiavana io nofinofy io, dia tokony ho mailo ara-panahy ianao hahatsapa fa miasa ny devoly, dia nanangona lisitr'ireo vavaka izay tokony holazainao hanoherana ny fandotoana nofy ianao.
Ry Ray Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana izay niantso ahy avy amin'ny maro mba hatolotro eo an-tànako ity asa lehibe ity, hoy aho Tompo hanomezana laza anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo, manohitra ny fahefana sy fahefana rehetra aho izay mety hanakana ahy tsy hanatanteraka ny asako sy ny tanjonao amin'ny fiainako, hofoanako ny fahefana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Tompo ô, milaza ny Baiboly fa tsy ho fohy ny fanantenan'ny olo-marina. Tompo, ny faniriako, faniriako ary nofinofiko dia hahazo hery hanehoana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, aringako amin'ny afo daholo ny hery rehetra te-handoto ny nofinofiko amin'ny tsy misy dikany, ny hery rehetra te-hanao ahy ho lasa tsy mifantoka amin'ny nofinofiko, rava ny fahefana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Mitsangàna Tompo ary avelao hiparitaka ny fahavalo, ny hery sy ny fanapahana rehetra mety te handoto ny nofinofiko sy ny faniriako, horavako amin'ny afo mandevona an'Andriamanitra Mahery Indrindra amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, milaza fa ho famantarana sy zava-mahatalanjona aho, Tompoko, tsy mety ho fanesoesoana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry Jesosy Tompo ô, azoko fa tsy mahasoa na amin'inona na amin'inona ny tsy ahombiazan'ny olona ny tanjon'ny fisiany, mivavaka aho aho hanampy anao hahatratra ny nofinofiko rehetra nataonao ho an'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny hery rehetra, ny demoniaka, na ny tetika rehetra izay mety te-handoto ny saiko hahatratra ny tanjoko eo amin'ny fiainana, dia avy amin'ny ran'ny zanak'ondry amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Milaza ny soratra Masina fa manambara zavatra iray ary haorina, mahazo hery hanehoana ny nofiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Mahazo ny fahasoavana ara-panahy aho vao manomboka miasa ao amin'ny birao izay ahy manokana amin'ny anaran'i Jesosy.
Mahazo fahefana amin'ny hery rehetra aho izay mitarazoka amin'ny fotoanan'ny fahombiazana, mandray ny Fiononako amin'ny fanahy rehetra aho izay manome fotoana hahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo Tompo ô, nolaviko ny fahatsapana fahalemena, mandray ny fahasoavana tsy ho rendremana aho mandra-pahatanterak'ireo nofinofiko sy ny faniriako amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny fialonana sy ny fialonana
Next lahatsoratraVavaka hanoherana ny filan'ny nofo
Dek Mavodse 30 Mey 2020 Amin'ny 8:50 hariva
Vao avy nivavaka aho tamin'ny fandotoana nofy nanantena fiovana eo amin'ny fiainako.Indro dia misy mpanamory saingy aorian'ity vavaka ity sy ny toy izany dia hitohy, hitoetra any ambony aho.
5 vavaka fampiononana ho an'ny fiterahana